Nin caan ka ahaa dalka Kenya oo la arkay isagoo derbi jiif ah |
Nin caan ka ahaa dalka Kenya oo la arkay isagoo derbi jiif ah
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada ee dalka Kenya qabsaday muuqaal aan la ogeyn xilliga la duubay oo uu kasoo muuqday nin lagu magacaabo Charles Matathia, kaas oo caan ka noqday dalka sanadkii 2013.
Ninkan oo qoray ama alifay filimkii caan baxay ee “Nairobi Half Life” ayaa muuqaalka laga soo duubay waxaa ka qiiroodaay dad badan oo u dhashay dalka Kenya, kuwaas oo ka xumaaday xaaladda uu ku sugan yahay Charles.
Charles ayaa kasoo muuqaalkan isagoo taagan wado ay maran baabuurta oo ku taalla deegaanka Kiambu isagoo tuugsanaya, xiran dhar wasaq ah, duruufna ay ka muuqato.
Charles Matathia ayaa xilliga muuqaalka laga duubay dhabarka ku sitay jawaan wasaq badan, wuxuuna xirnaa jaakad madow.
Muqaalka laga duubay ayuu ku sheegay in uu dhibateysan yahay, una baahan yahay in la garab qabto oo loo gargaaro.
Ninkan oo ay xaalad duruuf ka muuqatay ayaa mar ahaa nin caan ka ah dalka Kenya, dad badanna ay aad ugu riyaaqeen filimkii uu soo saaray.
“Magaceygu waa Charles Antony Matathia, waxaan ahay 40 sano jir, waxaan qoraa aflaanta, mashruucii aan ka shaqeeyay aad ayaad u wada taqaanaan, wuxuuna ahaa filimkii caan baxay ee “Nairobi Half Life”,ayuu yiri.
Qofkii muuqaalka ka duubay oo soo dhigay baraha bulshada ayaa sheegay in ninkaas uu aad u duruufeysan yahay, qofkii raba in u caawiyana uu isaga lasoo xiriiro.
Filimkii uu sameeyay Charles ee “Nairobi Half Life” ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa mid kamid ah filimadii loogu jeclaa dalka Kenya tobankii sano ee lasoo dhaafay, waxaana uu soo xareeyay boqolaal kun oo doollar.
Filimkaas ayaa mar loo xulay abaalmarinta filimada caalamka ee Oscar Awards, inkastoo uusan ku guuleysanin.
Filimkii uu sameeyay Charles ayaa markii dambe ku guuleystay abaalmarino kale, wuxuuna noqday mid aad looga xiiseeyo dalka Kenya, qaab-jilliinkiisuna uu ahaa mid si wanaagsan looga shaqeeyay.
Dad badan oo u dhashay dalka Kenya ayaa aad uga qiirooday xaaladda uu hataan ku sugan yahay Charles Matathia, waxayna ku baaqeen in loo gurmado, maadaam uu ahaa qof dhallinyaro ah oo hammi leh.
“Waa nasiib darro in qof hammigii aan arkay lahaa uu sidan yahay, waa wax aad looga xumaado” ayuu yiri Trevor oo kamid ah dadka ka falceliyay muuqaalka.
Dadka qaar ee isticmaala baraha bulshada ayaa arrinta ku tilmaamay mid ka turjumeysa xaaladda dhallinyarada shaqo la’anta ee dalka Kenya.
Sida lagu sheegay daraasad ay Qaramad Midoobay sameysay sanadkii 2017-ka, boqolkiiba 24 dhalinyarada Kenya ayaa la sheegay inay shaqo la’aan yihiin, arrintaas oo ah dhibaatada ugu weyn ee ka taagan dalka Kenya, dowladdana ay marwalba sheegto inay wax ka qabaneyso shaqo la’aanta dhallinyarada.